Uchwepheshe We-Semalt Uhlinzeka Izindlela Ezisebenzayo Zokuhlunga Ukudluliselwa Kokugaxekile Ne-Bot Traffic
Kungenzeka ukuthi ungene ngemvume ku-platform yakho ye-Google Analytics futhi wambona i-darodar.com, uthatha, nabanye abangenakulinganiswa embikweni wakho wokudlulisa amehlo. Noma, ngakolunye uhlangothi, ubonile i-spider monster ngokunyakaza okuhambelanayo.
U-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza lapha ukuthi kungani ukuhlunga ugaxekile kubalulekile.
Kunezinhlobo ezimbili zogaxekile ezivame ezitepheni zakho ze-analytics.
Okokuqala, ama-bots ahluleka ukuvakashela isayithi lakho - duo ïïî¿ïï
î»î±îºïî¹îºî± ïïî·ïî·. Ngibhekisela kubo ngokuthi "ghost bots". Lezi bots azixhunywanga ngogaxekile ku-veam engaqondakali kusuka ku-spam ye-imeyli, ukuphawula ugaxekile, namaflaya ngaphansi kwesiphequluli sakho semoto.
Okwesibini, i-bots efaka ingosi yakho. Ngizibiza ngokuthi "zombie bots", okuvame ukudala ugaxekile ohlolwe ngenxa yezizathu zabo ezahlukene.
Ngubani owenzayo nokuthi kungani kwenzeka?
i-Ghost bots kukhona izinto ezixhaphaza ngendlela ekhululekile ukuze ifike ngaphambi kweqembu labantu.
Zombie bots zingenakuqhathaniswa noma abominably zabanjwa bots. Amabhukha lapho ungabaza ukuthi ukhululekile futhi uyingxenye yohlaka lwewebhu..
Awukho impendulo ephelele kuyo yonke i-bots (ngokungabikho kosizo lukaGoogle), kodwa kukhona izinto ezimbalwa ongayenza ukuze uhlaziye ama-analytics akho.
Kunesilinganiso esiningi sokuqondisa okubi esikulo magazini. Ukusebenzisa ukulahlwa kokudluliselwa ngaphansi kwePropati ayinqunyelwe ukushayela ugaxekile ngenxa yokuthi:
Akuyona ilungiselelo elihlanganisa konke.
Akuyona kuphela eqondile.
Ungamane uhambise ukuhambela kokungena (okungabikho) / ukuvakashelwa ukuhambelana.
Akukusizi ukuthi uhlole ama-positi amanga ngolwazi oluqinisekisiwe.
Kuningi lendawo (ukubala abantu abathembekile kakhulu) okuphakamisa izinguquko ezikhethekile zeseva, isibonelo, .htaccess alters. Lokho kunjalo ngokucabangela okubi.
Ekugcineni, ibhokisi lokuhlola le-Google Analytics "ku-Bots Knots and Bugs" elingaziwa alihambisani ne-ghost ne-zombie bots.
Abadluliselwayo be-Ghost kukhona amaseshini avela ekuhlolweni okungakaze kwenzeke ngempela. I-bot ayizange icele noma yimaphi amadokhumenti avela kusistimu yakho. Idlulisele noma yiluphi ulwazi oludinga ukuthumela ngokuqondile kwi-platform yakho ye-Google Analytics ngokuqeda ikhodi yokuhlola ngekhodi ye-UA engenamkhawulo.
Zombie bots ikuvumela ezinye izindlela ezinikeziwe kusukela ngempela ukungena futhi unikeze isayithi lakho. Ngaphandle kweso ukuthi udinga ukubheka amalungiselelo ensizakalo-eceleni, lo msebenzi wokufundisa we-InMotion Hostingsolid. Ukuzivimbela ohlelweni lwakho hhayi nje kwengeza ungqimba wokuhlanza kuma-analytics wakho, kungenza nokunciphisa ukufakwa kwezimpahla kumaseva wakho we-server.
Kuze kube yilapho izilo zenza elinye ilungiselelo, sibophekile ukwenza iziteshi ezikhipha iningi lenhlangano yebhodi ngaphandle kokurekhoda ama-positive positives.